Inhloko ZeNdaba Nkwenkwezi 02, 2022
*** Abenhlanganiso elwela amalungelo eNtathelizindaba, eye of Southern Africa- Misa Zimbabwe namhlanje bamanyene labohlangothi lwezemfundo enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba olweUnited Nations Educational Science and Cultural Organisation -UNESCO kanye labakuhulumende emkhosini wokunanza ilanga lentathelizindaba, eleWorld Press Freedom Day owenzelwe koBulawayo.
*** Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi abazali bekhala ngokuqonga kwembadalo yama school fees lenye indingeko yezikolo.
Amalunga ambalwa awedale leU.S. House of Representatives, agoqela umkhokheli walo uNkosikazi Nancy Pelosi, akwele Poland lapho axoxisana khona leziphathamandla zelizwe ngokungenziwa kwele Ukraine okulempi eyesabekayo eyaqalwa ngeleRussia ngoNhlolanja lonyaka.
*** Umfelokazi wesizalwane seZimbabwe esabulawelwa kwele South Africa, uNkosikazi Nomusa Tshuma, uthi amapholisa athi kumele aphenduke eJohannesburg, enkambeni yabo, lapho okumele atshengiswe abantu abafika phose amatshumi amathathu, abacatshangelwa ukuba babulala umkakhe uElvis Nyathi.
***Selikhokhela ngemiklomelo emibili phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu ese Castle Lager Premier Soccer League iqembu lomdlalo wenguqu ele Dynamos..
*** Kulivetalk namhlanje sikhangela udaba lokusebenza kwentathelizindaba zikhululekile ngaphambilini kokunanzwa kwelanga labo ele World Press Freedom Day, kusasa mhlaka 3 Nkwenkwezi.